Thenga iiNgxelo zeYouTube- YTpals
Uza kufumana Ntoni?
Umgangatho ophezulu we-Backlinks ovela kwi-Blog Embeds
Iindawo eziphezulu zokuKhangela ku-YouTube (i-SEO)
UkuPhezulu kweVidiyo ePhakamileyo kunye neGunya
Ixesha elide, Iziphumo ezihlala ixesha elide
Ividiyo yakho kufuneka ukuba ibe nokuNgena kuVunyelwe
Thenga iiNgxelo zeYouTube ukunceda ukuphucula iziphumo zevidiyo yakho kunye nezithuthi.
Inani kunye nomgangatho we-embeds yeyona nto ibaluleke kakhulu ekumgangatho we-YouTube.
I-YouTube ibala ukushumeka kwevidiyo ngokubonakalayo ekuthandeni nevidiyo!
Ukunyuka kokuthandwa kwevidiyo yakho kunye negunya, i-YouTube ephezulu iya kuyibeka kwinqanaba kwaye ngakumbi baya kuyibonisa phambi kwabanye abantu ababukele iividiyo kwi-YouTube.
Uzibuza ukuba isebenza njani le nkonzo?
Xa u-odola le nkonzo, uya kungenisa ividiyo ofuna siyingene kwezinye iiwebhusayithi.
Kwiintsuku ezimbalwa ezizayo, siya kufaka ividiyo yakho kumakhulu eewebhu zabucala ze-2.0 ukuze uqiniseke ukuba ividiyo yakho ifumana ukubonakaliswa okungakumbi. UGoogle uya kuyibona ividiyo yakho ibethelelwe kuzo zonke ezi webhusayithi kwaye kwangoko ajonge ividiyo yakho ukuba ithandwa kakhulu kwaye ke unegunya eliphezulu.
Oku kuthandwa okuphezulu kunye negunya kukhokelela kuYouTube ekumiseni ividiyo yakho ephezulu kwiziphumo zokukhangela kwaye ayibonise rhoqo kwiwebhusayithi yabo kwabanye abantu ababukele iividiyo zeYouTube.
Yintoni iYouTube embedding?
Ngaba ukhe watyelela iwebhusayithi okanye ibhlog ebinevidiyo ye-YouTube eboniswe kuyo? Kukushumeka!
Ukuba ividiyo ifakelwe ngaphakathi (oku kunikwa amandla ngokungagqibekanga), ke nabani na unokufaka ividiyo yakho yeYouTube kwiwebhusayithi yakhe okanye ngaphakathi kwiprofayile yeendaba zentlalo.
Xa oku kusenzeka, kulungile! Ufumana ukukhuthazwa simahla, ngaphandle komzamo wevidiyo yakho.
Zithini izibonelelo zokushumeka kweYouTube?
Emva kokuba ubeke iodolo yakho, siya kuyithatha ividiyo oyingenisileyo kwaye siqale ukuyifaka kwiwebhusayithi efanelekileyo.
Siqala ukusebenza kwii-odolo ezintsha ngaphakathi kweeyure ezingama-24-72 emva kokuba zibekiwe. Emva koko, kuya kuthatha enye iveki ukugqiba ukuhanjiswa.
Kwenzeka ntoni emva kokuba ndibeke iodolo yam?
Ngaba le nkonzo iyodwa iya kwenza ividiyo yam iphumelele?
Ewe nohayi. Le nkonzo iya kunceda ukwandisa isikhundla sakho seYouTube kunye nokugcwala kwezinto eziphilayo, kodwa ukuphumelela ngokwenyani kwehla kwizinto ezahlukeneyo kwaye le yi-1 yezo zinto.
Ezinye izinto zokuphucula impumelelo yevidiyo yakho zibandakanya:
I-YouTube yeVidiyo ye-SEO-ukwenza isihloko sevidiyo yakho, inkcazo, iitagi zemeta, njl., Kubaluleke kakhulu. Ngethamsanqa, sinika le nkonzo! I-SEO ye-YouTube
Sebenzisa iShaneli yakho-ngaba ukhe uqaphele ukuba amajelo kunye nababhalisi be-1M + banesimo esahlukileyo kubo xa undwendwela? Kungenxa yokuba bayilungisile yonke into malunga nejelo labo ukuze babe yingcali kangangoko. Asizami ukuthengisa iinkonzo zethu, kodwa sinikezela ngenkonzo yokuvavanywa kwejelo ngokupheleleyo engakholelekiyo kwaye eyimfuneko ukuba ufuna impumelelo yokwenyani yeYouTube. Uvavanyo lweSitayile sikaYouTube
Umgangatho ophezulu weSitayile seBhanari kunye neVidiyo encinci - Kwakhona, sinikezela ngale nkonzo. Uyilo lwegraphic yeYouTube
Umxholo omkhulu (ngokucacileyo)
Jonga ukuba bathini abathengi bethu xa bethenga ii-YouTube